भारतकाे सीमा मिच्नेकाम कहिले सम्म ? महाकालीवारि सडक खन्दासमेत नेपाल माैन – Upahar Khabar
भारतकाे सीमा मिच्नेकाम कहिले सम्म ? महाकालीवारि सडक खन्दासमेत नेपाल माैन
प्रकाशित मिति : ४ फाल्गुन २०७६, आईतवार ०७:५३ February 16, 2020
दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका–१ को माल्पादेखि दोपखेसम्मकोबीच भाग भारतले डोजर गुड्ने सडक र महाकाली नदी तार्न पुल र काठेपुल बनाएको छ । भारतले नेपाली भूमिमा आएर यो क्षेत्रका दुई ठाउँमा सडक बनाएर डोजर र निर्माण सामग्री ढुवानी गरिरहेको समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ । ब्यास गाउँपालिका–१ र २ को सीमा क्षेत्र बयलीधारबाट करिब एक किलोमिटरमाथि डेढ सय मिटर तथा त्यसकै अढाइ सय मिटर परको दूरीबाट करिब ३०० मिटर जतिको डोजर जाने सडक बनाएको छ ।
एकतर्फी रुपमा सीमा क्षेत्रमा भारतले निर्माण गरिरहेको सडकका कारण महाकाली साँघुरिँदै र नेपालतर्फको घोरेटो बाटोमा समेत क्षति गरेको छ । नदीको वारिपारि ठूल्ठूला ढुंगाहरुले पानी नै देखिँदैन । धेरै ठाउँमा नदीले कटान गरेपछि ब्यास जोड्ने घोरेटोको भत्किएको छ । भारतीय पक्षले २०७४ सालमा पनि नेपाललाई कुनै जानकारी नदिई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नदी महाकालीमा काठेपुल राखेको र नेपाली भूमिमै आएर डोजर ओसारपसार गर्न ठाउँ–ठाउँमा सडक खनेको थियो ।
नेपाली भूमिमा भारतले डोजर गुडाउने बाटो बनाएको तीन साता बढी भएको स्थानीयले बताए । एउटा काठेपुल डेढ महिना अघि र दोस्रो महिना दिन अघि राखेको हो। माल्पा नजिकको काटार नजिक अन्तर्रा्ष्ट्रिय सीमा नदी महाकालीकोबीच भागमा ठूल्ठूला ढुंगा नदीको माथि राखेर पानीलाई ढुंगामुनि छिराएर जुनसुकै सवारी साधन गुड्ने सडकजस्तै पुल बनाएको छ ।
सल्यानमा युवतीको घाटी रेटेर हत्या, अभियुक्त अझै पत्ता लागेन